Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Italy U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football nge-isidlaliso "Bonnibauer". I-Leonardo Bonucci Childhood Story yethu kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ikhono lakhe lokwenza izigameko ezinembile zesikhathi eside kodwa abambalwa abheka i-Bio kaLeonardo Bonucci eyithandekayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
Ukuqala, ULeonardo Bonucci wazalwa kwi-1st usuku lukaMeyi 1987 eViterbo, e-Italy. Wazalelwa nguyise uClaudio Bonucci (umuntu osomabhizinisi onesithakazelo ekuthengiseni amapende) nomama wakhe uDorita Bonucci.
Ukukhula ePianoscarano (idolobha elingumakhelwane endaweni yaseBonucci endaweni yokuzalwa) eyaziwa kakhulu ngezingqikithi zalo zesikhathi esidlule, uBunucci omncane no-Chubby uthuthukile kakhulu.
Akubanga nje isikhathi eside umndeni kaLeonardo uqiniseke ukuthi banikeze uthando lwakhe lo mdlalo ngokwanele lokukhuluma njengoba ebhalise ngokugcwele esigabeni sasekhaya sasePianoscarano lapho engaqala khona ukudlala ibhola elikhuphisanayo ngesikhathi esisezingeni eliphansi kodwa wenza ingxenye engcono kakhulu ebuntwaneni bakhe.
ULeonardo Bonucci Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts-Abadlali bezemidlalo
Uthando lukaBonucci lwebhola lwaba nomthelela omkhulu emndenini wakhe, uClaudio Bonucci (ubaba wakhe onomdlandla wezemidlalo) kanye nomfowabo omdala, uRiccardo (ovezwe ngezansi noBonci) owadlala ibhola eqenjini elibhekene neSerie C1 ngeViterbese.
Imali kaRiccardo ekusizeni osemncane uBonucci ukuthola izinyawo zakhe eqenjini lakubo ayikwazi ukugcizelela kakhulu. Ngaphandle kokuvikela uBucucci kubahlukunyezwa, uRiccardo wasebenza nokuqinisekisa ukuthi umfowenu omncane wabonakala ekitsheni ehlanzekile ngaphambi kwezemidlalo nokuqeqesha.
I-Leonardo Bonucci Ingane Yomntwana Plus Amaqiniso Angangabazali Abazali-Ukukhulisa Abazali Ngokuzikhukhumeza
Ukuba ngowokugcina owazalwa ngabazali bakhe, uBonucci akazange aphuthelwe othandweni kanye nezinzuzo ezihambisanayo ngokwemvelo ezinikezwe ilungu elincane kunabo bonke emndenini. Abazali bakhe bamnika ukukhululeka ekufiseni izifiso zakhe kubandakanya nokwenza ukudla okuthandayo okukhona futhi kumlindele ukuba adle nge-gusto !.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
UBucucci ushiye iqembu lakhe ukuze aqale umqeqeshi weqembu lakhe ngaphansi kweqembu le-15 yaseViterbese ngesikhathi eneminyaka engu-13 ubudala futhi ehlala neqembu kuze kube yi-2004.
Ngokuhamba kwesikhathi, uBonucci wajoyina i-Inter Milan e-2005 lapho evuka khona enkundleni yentsha yeqembu ukuze abe yilungu leqembu le-Inter U20 futhi wanqoba isihloko seqembu lesizwe. Umdlalo webhola lomusha osetshenziselwa ukuzama ukumbona wabona uBucucci athuthela eTrviso, ePisa naseBari lapho azuze khona kancane waze wahamba waya kuJuventus nge-1st ka-July 2010.
KwakuyiJuventus ukuthi uBonucci wayebambisane nabalingani beqembu uBargagli noChiellini ukuze baqinisekise ukuzivikela kwamadoda amathathu ngaphansi kwesakhiwo se-3-5-2. I-trio yathola isiteketiso BBC, (ezithathwe ekuqaleni kwazo) futhi ndawonye, ​​zenze esinye sezivikelo ezinhle kakhulu, sisiza iqembu kanye noBonucci ukuba bahole isihloko sakhe sokuqala esikhulu, i-2011-12 Scudetto, futhi wamthola indawo ekugcineni UEFA Euro 2012 iqembu. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
UBonucci ungomunye wabadlali abanobuchwepheshe abanobuchwepheshe abakwazi ukufuna nokugcina uthando ngaphandle kwezemidlalo yezemidlalo. Lokhu kuchaza ukuthi kungani esesebudlelwane nentombi yakhe engumdala kanye noModeli Martina Maccari, owahlangana naye eminyakeni eminingi edlule.
Lo mbhangqwana washada ngoJune 2011, wagcina isibopho esibe namandla ngaphezu kweminyaka.
Umshado wabo ubusisiwe ngamadodana amabili; U-Lorenzo (owazalwa ngoJulayi 2012) noMatteo, (owazalwa ngoMeyi 2014). Bobabili izingane zithandeka kubazali babo abangalokothi baphohlwe ithuba lokufakazela ukuthi bayabathanda kangakanani.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Cishe i-Quitted Football
UBonucci wayenenkinga enkulu kakhulu yokusebenza kwakhe kwebhola ngesikhathi indodana yakhe encane, uMatteo enesifo esibi kakhulu (i-hernia) eyayidinga ukuhlinzwa okuphuthumayo ngoJulayi 2016.
Le nkathi yayiyinkimbinkimbi kakhulu kuBonucci njengoba engakwazi ukugxila noma ukucabanga nganoma yini ngaphandle kokuthola okusheshayo kwendodana yakhe. Ezinyangeni emva kokuhlinzwa, uBonucci ubike ngezikhathi ezivivinyayo ngesikhathi sokuxoxisana no-El Pais.
"Ezinyangeni ezintathu noma ezine, ikhanda lami lalingekho endaweni elungile, yikhanda elithola imilenze ihamba. Ngemuva kwezinsuku ze-15 ngemuva kokuhlinzwa, ngize ngiqale ukumbona ethuthukisa, ngangingenaso isithakazelo ekuqeqeshweni noma nganoma yini ephathelene nebhola. Ngihlale ngizonda izibhedlela futhi ngizama ukuzigwema, kodwa ngaleso sikhathi kwakudingeka ngibe khona futhi nganginzima ngempela ukuzola ".
Ekhuluma ngokuqhubekayo, wembula ukuthi cishe ushiya ibhola ngesikhathi sokuzama.
I-Matteo ingcono kakhulu manje futhi umndeni wethu uzizwa unobunye kakhulu kunanini ngaphambili. Yebo, ngacabanga ngokuyeka. Ibhola akuyona into ebaluleke kakhulu kimi ngaleso sikhathi. Ubona indodana yakho eningi kakhulu ukuze uphile, ikubuza imibuzo eminingi nokuthi kungani lokhu kwenzeka kuye ... futhi ngangingekho izimpendulo. Izinguquko ezibalulekile ngalezo zikhathi. Manje ngizitshela ukuthi nginenhlanhla. Konke engikwenzile kuye kwavela enhliziyweni. "
Nokho, uMatteo waphinde wabuyisa futhi ukuthuthukiswa kwaletha injabulo enkulu kubazali abangakwazi ukusiza ukuthi indondo yakhe ye-2017 Serie A ibe yindodana yakhe.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuhlaselwa Ngu-Robber
UConucci wenza umzamo omkhulu ekuvikeleni umndeni wakhe ngesikhathi abaphangi behlomile bebhekene naye, umkakhe nendodana yakhe eneminyaka emihlanu ubudala ngo-Okthoba 2012.
Naphezu kokubanjwa, wakwazi ukujezisa omunye wabaphangi ngenkathi ezama ukuqoqa iwashi acele ku-defender.
Kodwa abaphangi baphunyuke neqembu labo ngezimoto ngesikhathi bexoshwa emgwaqweni ngu-defender onamandla.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
I-Bonucci iyasebenza futhi isekelwe kahle. Ungumuntu othanda ukuvuna izithelo zomsebenzi wakhe njengoba kubonakala ebhokisini lakhe lemidlalo eminyakeni yamuva. Ngaphezu kwalokho, naye uzizwa isidingo sokuzungezwe uthando oluvela emndenini nobuhle obuvela kumkakhe.
Njengoba kuhlobene nokuphila kwakhe, uBonucci ngumuntu ocabanga ukuthi uthinta futhi unambitha njengento ebaluleke kakhulu kuzo zonke izinzwa zakhe. Akathandi izinguquko ezinzima ngokungazelelwe empilweni yakhe siqu, ubuhlobo bomshado, nokungavikeleki kwanoma yiluphi uhlobo. Ukungavikeleki kwazizwa ngemuva komzuzwana.
Ngokuqondene nobuthakathaka bakhe, uBonucci angaba nenkani, abe nempahla futhi enganaki. Ngaphezu kwakho konke, uyindoda enokwethenjelwa, enesineke, esebenzayo, ezinikele futhi enomthwalo wemfanelo.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ubuningi be-On-Pitch
U-Bonucci, ozibekelele njengomunye wabavikeli abakhulu kunazo zonke emhlabeni udunyiswe ngokweqile ngamakhono akhe obuholi.
Uye wachazwa njengomholi wemvelo oqhuba ithimba ngobukhona bakhe. Lokhu kwabonakala esitatimendeni sakhe ngokushesha njengenqununu yeqembu lapho esayinwa eMilan.
Ukuqaphela ngokwengeziwe ukuqina kwakhe kobuholi wabona ukuthi wagxila ithuba lokushaya induna yakhe yeSerie A club, uJuventus kanye neqembu lakhe likazwelonke, e-Italy.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukumangalelwa kokufanisa ukufanisa
UBucucci, kanye nomdlali weqembu lakhe uJuventus, umphathi we-Antonio Conte, kanye nabanye abadlali abaningi basolwa ngokulungisa iMeyi 2012.
Ubekwa icala ngokuzikhandla ekulungiseni umphumela we-3-3 emelene no-Udinese ngo-May 2010, okungenzeka ukuthi ubhekene nokuvinjelwa kuka-3 nangonyaka uma etholakala enecala ngesikhathi uphenyo lwe-2011-12 Italy.
UConucci, wavuma icala elingekho emthethweni futhi wabe esecala eceleni kwePepe ngo-Agasti ngonyaka ozayo.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Isizathu Esiphezulu Sesidlaliso
UBonucci wabizwa ngokuthi "Beckenbonucci"Ngokucindezelwa kwe-Italian okuyinto eqhathanisa amandla akhe okuzivikela kulokho famous German player and manager François (Franz) Beckenbauer.
Nakuba uFranz wadlala ibhola njengomdlali, wayenamakhono obuholi obuhle kakhulu abona izwe lakhe (West Germany) ukunqoba iNdebe yoMhlaba ku-1974.
Amakhono afanayo namakhono afinyelelwe kuLeonardo Bonnuci owathiwa kuqala Beckenbauer before an appropriate name “Beckenbonucci” was developed.
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Akuyona nje i-Shirt Number
Ngesikhathi abanye abadlali bebhola beba nezinombolo ezibonisa izindima zabo emkhakheni lapho bedlala inombolo ye-19 ku-shirt Leonardo Bonucci ihamba ngaphezu kwemisebenzi kanye nesabelo. Ekhuluma ngesikhathi sokushicilelwa kwezindaba ku-2016, uBonucci wagxila ukubaluleka kwenombolo ye-19 hhayi kuye kuphela kodwa nomndeni wakhe:
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Leonardo Bonucci Childhood Indaba kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.